Fiarovana bebe kokoa anaty aterineto, tsy natao ho an’ny ao Azia Afovoany · Global Voices teny Malagasy
Apple, namboraka fitaovana fiarovana tsy azon'ireo mpanjifany ao Kazakhstana&Tiokmenistàna sitrahana
Voadika ny 17 Jona 2021 2:17 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, English, Español, English
Sary: mizoguchi.coji (CC BY 2.0)
Kazakhstana sy Tiorkmenistana dia anisan'ireo firenena vitsy tsy misitraka ny fitaovana iray naborak'i Apple, ilay amerikàna goavan'ny teknôlôjia, ho an'ireo mpampiasa azy mba hiarovana ny tsiambaratelom-piainana.
Tanjon'i Apple ho an'ny taona 2021 ny tsiambaratelom-piainana. Ao amin'ny tranonkalany, milaza ilay orinasa fa “Fototry ny zo maha-olona ny tsiambaratelom-piainana.” Kanefa, misy fanavakavahana ihany tonga miaraka amin'io pôlitikany io.
Ho an'ireo mpanjifa azy ao Shina, Bielorosia, Kôlômbià, Ejipta, Kazakhstana, Arabia Saodita, Afrika Atsimo, Tiorkmenistana, Ogandà ary Filipina, tsy ho azon'izy ireo sitrahana ilay tolotra vaovao “Private relay” (fanohizana manokana).
Ilay zavatra vaovao, natao ho an'ireo mpanjifa mandoa vola amin'ity lohataona ity miaraka amin'ny famoahana ilay mpandrindra milina vaovao (OS), dia hahafahan'ireo mpampiasa mitety ny tranonkala amin'ny fomba azo antoka kokoa, amin'ny alàlan'ny fanidiana ny fantsona fifandraisany izay hanafina ny zavatra rehetra ataony miaraka amin'ny olona rehetra anaty tambajotra, afa-tsy ho an'ilay mpampiasa irery ihany. Amin'ny ankapobeny, ilay tolotra vaovao dia tambajotra virtoaly manokana (VPN) tsy miankina amin'ny hafa.
Pikantsary avy ao amin'ny tranonkalan'ny Apple
Miaraka amin'ilay “fanohizana manokana,” nopetahan'ny Apple ny iray amin'ireo olana maro momba ny karazana angondrakitra izay omen'ireo mpisera ho an'ireo mpanome tolotra sy ireo hafa mampiasa izany rehefa mitety ny haban-tranonkala izy zareo, na mampiasa tolotra sasantsasany.
Ireo firenena izay voahilika tsy afaka mampiasa ilay fitaovana vaovao dia samy manana tantara lavabe amin'ny resaka sivana an-tambajotra sy fitsikilovana ny hetsika an-tambajotran'ireo mpiampiasa aterineto. Ny hany niavaka dia i Afrika Atsimo, izay mirehareha amin'ny laharany ambony indrindra ao anatin'ny tatitry ny Freedom House Fahalalahana anaty Tambajotra tamin'ny taona lasa, misy ireo firenena afrikàna.
Kazakhstana, manokana, izay any amin'ny ambany indrindra ao anatin'ilay fandaharana, dia nanohintohina tamin'ny fomba mibaribary ny fahafahana miditra amin'ny aterineto, nitsikilo izay rehetra nataon'ireo mpisera ary nanameloka olona noho ny fanehoana hevitra an-tambajotra. Taorian'ny famelezana tety anaty media sôsialy nanala baraka banky sasantsasany taorian'ny fidinan'ny sandambola tao amin'ny firenena tamin'ny Febroary 2014, nandàny didim-pitondràna iray ny fanjakàna, didy izay manao ny “fanapariahana vaovao tsy marina” ho heloka bevava.
Koa satria efa noraisina ho toy ny loharanom-baovao ho an'ny daholobe ny loharano ety anaty tranonkala, nanomboka tamin'ilay lalàna tamin'ny 2009, dia mampihatra fepetra henjena momba ny fahamendrehana amin'izay rehetra avoaka ety anaty tambajotra i Kazakhstana, ary vonona ny hanakana ny fidirana amin'ireo loharano rehetra tsy manaja ny lalàna ao aminy.
Efa im-betsaka ireo manampahefana ao amin'ny firenena no nanandrana nanery ireo mpampiasa mba hametraka ny “taratasy fanamarinam-piarovana – security certificates” izay hanokatra ny varavarana hidiran'ireo fanafihana / fijirihana ataon'olona avy any ivelany, fomba iray ahafantarana ireo mpijirika – sy ny mpitandro filaminana – ary hahafahan-dry zareo manongilan-tsofina.
Nahazo teny maharary tamin'ireo orinasa Amerikàna momba ny teknôlôjia ilay andrana farany indrindra, tamin'ny Jolay 2019, dia ireo orinasa izay nilaza fa hibahana ny fàkan'ilay taratasy sy handingana azy io raha atao an-tery ny fametrahana azy.
Tao Tiorkmenistana, noferan'ny rafi-pitsaràna sy ireo sampandraharaha fiarovana mba ho faran'izay kely indrindra ny fahalalahana eny anaty tambajotra: marobe ireo tranonkala sy media sôsialy no voabahana na tsy afaka nidirana, noho ny famerana ny korianam-pifandraisana (bandwidth).
Rachel Gasowski, mpikaroka mifantoka amin'izay miseho ao Azia Afovoany, avy amin'ny International Partnership for Human Rights (IPHR), dia nilaza tamin'ny Global Voices fa miaina eo ambany horohoro mandrakariva ny fahalalahan'ny aterineto ao Kazakhstana sy Tiorkmenistana.
Voatohintohina ny fahalalahan'ny aterineto ao Kazakhstana, ary efa mahazatra ny fibahanana ireo tranonkalam-baovao sy ny media sôsialy, ary na ny fidirana amin'ny aterineto mihitsy aza. Voafetra ny fahafahana miditra aterineto ao Tiorkmenistana, mihisatra sy lafo raha ampitahaina amin'ny fenitra erantany, ary ho ampahany amin'ny fanentanana tsy mitsahatra ataon-dry zareo hamelezana ny mpanohitradia sivanin'ireo manampahefana ny aterineto.
Tamin'ny Febroary, ny governemanta tao Tiorkmenistàna dia nampidina ny sandan'ny fisoratana anarana amin'ny fahazoana aterineto, andrana iray hanitàrana ny fanarahamaso eny anivon'ny vahoaka. Kanefa, mbola mijanona ho ambony noho ny salanisa any amin'ny faritra hatrany izany.
Mazava ho azy araka izany raha iray amin'ireo fitaovana zara raha ampiasaina any Azia Afovoany ny Apple. Sady koa, ny fanentanana ataony mifantoka amin'ny fiainana manokana dia olombitsy amin'ireo mpanjifa azy ao amin'ny faritra ihany no hahita tombony aminy.
Nasehon'ilay fikambanana mpanaramaso ny zon'olombelona Amnesty International ny hadisoam-panantenany manoloana ny fanilihana tsotra izao ny firenena vitsivitsy.
Ny fanapahankevitry ny Apple tsy hametraka ilay “private relay” vaovao ho azo raisina any amina firenena maro, isan'ireny i Shina, Arabia Saodita ary Kazakhstana, dia ohatra iray hafa amin'ny fanarahamaso tsy refesimandidy & feno famoretana ataon'ny governemanta & faneriterena ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny alàlan'ny fanaovana tsindry aloka amin'ireo orinasa misahana teknôlôjia & vokatr'izy ireny.
Tsy namaly ny fanontanianay ny tarika mpifandray amin'ny gazety ao amin'ny Apple momba izay antony tsy ampiharana ny “zo fototra maha-olona” tahaka izany amin'ireo mpanjifany ao Kazakhstana sy Tiorkmenistana.
“Mbaribary fa voatery nanaraka ny fepetra araka ny lalàna napetraka ao Kazakhstana sy Tiorkmenistana ny Apple. Tokony ho ampiharin'ny Apple tsy asiana fiangarana sy amin'ireo mpanjifany rehetra ny fepetrany momba ny resaka tsiambaratelo sy ny zon'olombelona – na aiza na aiza firenena misy ireny mpanjifany ireny,” hoy i Gasowski tao anaty imailaka nosoratany ho an'ny Global Voices.